WeTransfer: यो के हो र यसले कसरी काम गर्दछ? | ग्याजेट समाचार
WeTransfer: यो के हो र यसले कसरी काम गर्दछ?
हामी एक अनुप्रयोगको बारेमा कुरा गर्नेछौं जुन फाईल ट्रान्सफर र क्लाउड भण्डारणको सर्तमा सबैभन्दा लोकप्रिय बीचमा स्थान बनाइरहेको छ। यदि तपाइँ सहकर्मीहरू वा तपाइँको मालिकलाई निरन्तर ठूला फाइलहरू पास गर्न आवश्यक छ भने, त्यहाँ मार्केटमा केहि अनुप्रयोगहरू छन् जुन WeTransfer सँग मेल खान्छन्।। यो उत्तम छ विशेष गरी जब तपाईं फाईलहरू पठाउन चाहानुहुन्छ जुन मेलले तपाईंलाई संलग्न गर्न अनुमति दिदैन। तपाईं यसलाई पूर्ण नि: शुल्क प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यसले तपाईंलाई फाईलहरू पठाउन वा प्राप्त गर्न सदस्यता लिन आग्रह गर्दैन।
हामीले उल्लेख गरिसक्यौं, WeTransfer हाल यस प्रकारको सबैभन्दा लोकप्रिय अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो। हामी विस्तारपूर्वक वर्णन गर्न गइरहेका छौं किन यस अनुप्रयोगलाई Dropbox जस्तो अनुप्रयोगहरूको प्रयोगको लागि सिफारिस गरिएको छ क्लाउड भण्डारण। यद्यपि सब भन्दा चाखलाग्दो हो निस्सन्देह फाइलहरूको स्थानान्तरण बिना प्रयोगकर्ताहरू बीच पूर्व पंजीकरण। WeTransfer के हो र यसले कसरी कार्य गर्दछ भन्ने फेला पार्नको लागि पढ्नुहोस्।
1 WeTransfer के हो?
1.1 WeTransfer प्रयोगका फाइदाहरू
2 यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने?
2.1 सबैभन्दा सरल विधि
3 मोबाइलमा WeTransfer प्रयोग गर्नुहोस्
WeTransfer के हो?
WeTransfer एक अनलाइन प्लेटफर्म हो कि क्लाउडमा आधारित छ र डिजाईन गरीएको छ कि तपाईं विभिन्न प्रकारका फाईलहरू नेटवर्कमा पूर्ण रूपमा अन्य प्रयोगकर्ताहरूमा स्थान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ। यो प्रयोगको सहजता, यसको वेग र सबै भन्दा माथि, यसको ० लागतका कारण यो सेक्टरमा सबैभन्दा प्रख्यात अनुप्रयोग मध्ये एक भएको छ। यो धेरै उपयोगी फाइलहरू एकै समयमा धेरै वा धेरै व्यक्तिहरूलाई पठाउन उपयोगी छ, केवल ईमेल खाता प्रयोग गरेर।
यसको सबै भन्दा राम्रो फाइदाहरू मध्ये एक जसले यसलाई अन्य विकल्पहरू माथि बनाउँदछ यसले अघिल्लो दर्ताको लागि पनि माग गर्दैन। यसले या त फाईल प्राप्तकर्तालाई सोधदैन। यसैले हामी कुनै पनि रेकर्डको साथ हाम्रो मेल स्थापना गर्न वा सम्बद्ध गर्न कष्ट बिना कुनै अपरेशनहरू गर्न सक्दछौं, मात्र फाइल चयन गर्नुहोस् र हाम्रो ईमेल खाता प्रयोग गरेर पठाउनुहोस्।
WeTransfer प्रयोगका फाइदाहरू
यो अनुप्रयोगले हामीलाई कुनै पनि प्रकारको रेजिष्ट्रेसनको लागि अनुरोध गर्दैन, तर यदि हामी व्यक्तिगत खाताहरू सिर्जना गर्न सक्दछौं भने, यसको एक पनि छ भुक्तान योजना जसमा हामी केहि अधिक उन्नत विकल्पहरूको मज्जा लिन सक्छौं। सबैभन्दा प्रमुख निस्सन्देह छ हामी २० नि: शुल्क ट्रान्सफर गर्न सक्दछौं २ जीबीको सट्टा २० जीबी सम्म फाईलहरू पठाउनुहोस्।
यो योजनाले हामीलाई अधिक उन्नत प्रयोगकर्ताका लागि अन्य धेरै लाभदायक सुविधाहरू पनि प्रदान गर्दछ। १०० जीबी स्पेस क्लाउडमा भण्डारण गर्न, धेरै जीबी यदि हामी धेरै भिडियोहरू वा फोटोहरू भण्डार गर्न सक्छौं, साथै परियोजनाहरू। हामीसँग पृष्ठको लागि विभिन्न पक्षहरूको साथ हाम्रो खातालाई अनुकूलित गर्न सक्ने क्षमता छ जहाँबाट अन्य प्रयोगकर्ताहरूले हाम्रा साझा फाइलहरू डाउनलोड गर्न सक्दछन्। यो भुक्तानी योजना छ प्रति वर्ष € १२० को मूल्य वा प्रतिमाह १२ डलर।
हामीले पहिले नै छलफल गरिसकेका छौं कि, WeTransfer को नि: शुल्क फाइल साझेदारी सेवा प्रयोग गर्न पहिलेको दर्ता आवश्यक पर्दैन। यस सेवा प्रयोग गर्न सब भन्दा सजिलो र सब भन्दा चाँडो तरीका भनेको वेब ब्राउजरबाट सिधै हो।
पहिले हामी तपाईंको पृष्ठ पहुँच गर्दछौं हाम्रो मनपर्ने वेब ब्राउजरबाट आधिकारिक वेबसाइट। पहिलो उदाहरणमा, यसले हामीलाई सोधिनेछ यदि हामी नि: शुल्क संस्करण प्रयोग गर्न चाहन्छौं वा यदि हामी उपरोक्त लाभका साथ प्लस प्लान अनुबंध गर्न चाहन्छौं भने। हामी हाम्रा ठूला फाइलहरू निःशुल्क सित्तैमा पठाउन मलाई टेक फ्रीमा क्लिक गर्दछौं।
अब हामी सेवा पृष्ठमा आफूलाई भेट्टाउनेछौं, एक आकर्षक डिजाइनको साथ जुन हामी केवल गर्न सक्छौं बायाँपट्टि बक्समा देखा पर्ने विकल्प छनौट गर्नुहोस्। पहिलो पटक हामी यसलाई प्रयोग गर्दा, हामीले सर्तहरू स्वीकार्नुपर्दछ र सम्झौता स्वीकार्नुपर्दछ (कुनै अनलाइन सेवामा विशिष्ट केहि)। हामी स्वीकार गर्न जारी राख्न क्लिक गर्दछौं।
अब बक्स अर्को कहाँ देखाउन परिवर्तन हुनेछ तपाईंको फाईलहरूको लागि डाटा ढुवानी। जारी राख्न हामी यसलाई भर्दछौं।
हामी + बटन क्लिक गर्छौं हामी फाईलहरू थप्नको लागि जुन हामी हाम्रो कम्प्युटरबाट पठाउन चाहन्छौं। यो गर्नका लागि, हाम्रो ब्राउजरले ती फाइलहरू छान्नका लागि फाइल एक्सप्लोरर खोल्नेछ। याद गर्नुहोस् कि नि: शुल्क संस्करणको साथ फाईल अधिकतम आकार २ जीबी हो। साथसाथै कुलमा, त्यो हो, यदि हामीले धेरै फाईलहरू छनौट गर्यौं भने ती दुई जीबी तौलभन्दा बढी हुनु हुँदैन।
हामी स्थानान्तरण गर्न चाहेको फाइलहरू थप गरेपछि, हामीdडटहरूको आइकनमा क्लिक गर्दछौं कि हामी बायाँ छौं हामी फाईलहरू साझेदारी गर्न चाहेको तरिका छनौट गर्नुहोस्.
हामीसँग दुई विकल्पहरू छन्। यदि हामी चयन गर्दछौं ईमेल विकल्प, WeTransfer यसले क्लाउडमा फाईलहरू अपलोड गर्ने ध्यान राख्नेछ र प्रक्रिया समाप्त भएपछि यसले तपाईंले प्रविष्ट गरेको ठेगानामा ईमेल पठाउँनेछ, प्राप्तकर्तालाई संकेत गर्दै कि तपाईंले केही फाइलहरू पठाउनुभयो जुन उनीहरूले डाउनलोड गर्न सक्ने केवल लिंकमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्दछन्। तिनीहरूको ईमेल।
अर्को विकल्प छ "लिंक" त्यो एक सन्देश अनुप्रयोग को माध्यम बाट साझा को लागी लिंक उत्पन्न गर्दछ टेलिग्राम वा वाट्सएप। यस लि्कले प्रापकलाई WeTransfer पृष्ठमा पुनःनिर्देशित गर्दछ ता कि तिनीहरू फाईलहरू उनीहरूको कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्न सक्छन्।
यदि हामीसँग भुक्तानी योजना छ, हामी धेरै विकल्पहरू सक्रिय गर्दछौं जसले हामीलाई हाम्रो फाईलहरूको सुरक्षा सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ र तिनीहरूको लागि म्याद सकिने मिति स्थापना गर्नुहोस्।
सबैभन्दा सरल विधि
कुनै श doubt्का बिना, ईमेल विकल्प सुरक्षित र सरल छ, किनकि यो प्राप्तकर्ताको ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्न पर्याप्त हुनेछ तिनीहरूको उपलब्धता वा उनीहरूको मेसेजिंग अनुप्रयोगमा निर्भर बिना। हामी आवश्यक भएमा निर्देशनहरू सहित सन्देश थप्न सक्दछौं।
एक पटक फाईलहरू पठाइसकेपछि, ग्राफ पूरा हुनेछ जुन अपरेसनको प्रतिशतको साथ देखाइनेछ। यो प्रतिशत सकियो भने हामी वेब ब्राउजर बन्द गर्न सक्दैनौं, न त पाठ्यक्रमको कम्प्युटर बन्द गर्न सक्दछौं। स्थानान्तरण समय दुबै हाम्रो इन्टर्नेट जडान र सर्भरको संतृप्तिमा निर्भर गर्दछ।
समाप्त भएपछि हामी यस ठेगानामा ईमेल प्राप्त गर्नेछौं जुन हामीले हस्तान्तरण पूरा भएको बारे सूचित गर्न सूचित गर्यौं। साथै प्राप्तकर्ताले डाउनलोडका लागि फाईलहरूको रिसेप्शनको बारेमा जानकारी दिने एक ईमेल पनि प्राप्त गर्नेछ। जब प्राप्तकर्ताले फाईलहरू डाउनलोड गरिसकेका हुन्छन्, हामी फेरि एक इमेल प्राप्त गर्नेछौं रसिदको बारेमा सूचित गर्दै र तिनीहरूको पक्षमा डाउनलोड गर्दछौं।
मोबाइलमा WeTransfer प्रयोग गर्नुहोस्
हामीसँग हाम्रो स्मार्टफोनबाट फाईलहरू पठाउन विकल्प छ, यसका लागि उत्तम विकल्प भनेको अनुप्रयोग स्थापना गर्नु हो आईओएस वा एन्ड्रोइड। मोबाइल संस्करणहरूमा अपरेशन वेब पृष्ठसँग मिल्दोजुल्दो छ, हामीले केवल फाइलहरू छनौट गर्नुपर्दछ जुन हामी सेयर गर्न चाहन्छौं र एप्लिकेसन वा प्रोग्राम चयन गर्न चाहन्छौं जुन हामी डाउनलोड लि send्कमा पठाउँदै छौं।
WeTransfer द्वारा संकलन
विकासकर्ता: WeTransfer BV
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » WeTransfer: यो के हो र यसले कसरी काम गर्दछ?
फिलिप्स २273 बी,, एक मोनिटर जसले टेलिworking्कि [[विश्लेषण] बृद्धि गर्दछ।
अमेजन फायर टिभी स्टिक (२०२०), क्लासिक जुन अझै कार्य गर्दछ